Nezvedu - Shaoxing Sich Cosmetics Packaging Co., Ltd.
SHAOXING SICH COSMETICS KUPAKA LIMITED [Yuyao Langrun Plastic Fekitori] inyanzvi yekugadzira zvigadzirwa zvepurasitiki muChina, iri muYuyao guta. Kambani yedu inovhara zvachose nezve chiuru metres. isu tiri nyanzvi fekitori kuburitsa zvipikiri zvekupikira zvipikiri nemidziyo yekuzora ine ruzivo rwakazara.we tine mazana evatengi pamba nekune dzimwe nyika.we tinogona kupa dhizaini dhizaini uye furuu service.our fekitori iri muZhejiang, Tinewo hofisi kuGuangzhou.
zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kugadzirwa kwepurasitiki mapakeji zvigadzirwa. Iyo zvigadzirwa mitsara inovhara: epurasitiki kirimu zvirongo uye mabhodhoro ekuzora, mabhodhoro eacrylic, PP / PS zvirongo nemabhodhoro, makomputa emakomputa, chipikiri kurongedza uye zvimwe zvekuzora zvigadzirwa. Isu tinonyanya kubata nebhizimusi rinotungamira kunze, uye tinopa kurongedza mhinduro kune mazhinji anozivikanwa ezvishongedzo kumba uye kunze kwenyika.
Kwemakore anopfuura gumi ekubatanidzwa pamwe nekugadzira hunyanzvi, isu takabudirira mukupa vatengi vedu mhinduro dzakakodzera dzekurongedza dzinoona kuchengetedzwa nekusimudzira chinzvimbo chechiratidzo mumusika.
Tine imba-dhizaini nekugadzira timu, otomatiki color yekushongedza muchina, silika yekudhinda screen uye inopisa yekutsika muchina wekunyora uye akasiyana mamodheru ejekiseni uye anoridza michina. Zvese izvo zvinobatsira kune zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye nekukurumidza kununura kune vatengi vedu.
Isu tinopa epamberi tsika yekushandisa zvigadzirwa kuti zviunze mazano matsva kumusika. Yedu-mumba timu yemainjiniya uye vagadziri vanokubatsira iwe nepfungwa yako, basa, hunyanzvi uye marongero. Chinangwa chedu ndechekubatsira iwe kupa chigadzirwa chinoshanda, chine hunyanzvi, uye chinodiwa kune vako vatengi. Kana iwe uchida kuti kurongedza kwako kuitwe nemazvo, enda neiyo SICH Packaging Kambani.
Zvizorwa Cream chirongo, Nhema Bhodhoro Gel Polish, Zvizorwa Cream Midziyo, Ziso Cream Jar, Zvizorwa Poda Container Ine Sifter, Cream zvirongo zvizorwa kavha,